एसईईको नतिजा आजै प्रकाशित हुने ! – Namaste Dainik
August 17, 2020 NamastedainikLeaveaComment on एसईईको नतिजा आजै प्रकाशित हुने !
काठमाडौँ — राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा आजै(सोमबार) प्रकाशित गर्ने भएको छ । बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले बोर्डको बैठकले यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा बोर्डले प्रमाणीकरण गरेपछि नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ । बोर्ड स्रोतअनुसार (आज) सोमबार साँझ वा मंगलबार (भोलि) नतिजा प्रकाशित गर्ने सम्भावना छ ।
बोर्डले १० दिनअघि नै विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा तयार पारेको थियो । नतिजा प्रकाशित गर्दा विद्यार्थीको चहलपहल बढ्ने र कोरोना संक्रमण झनै फैलन सहयोग पुग्‍ने भन्दै रोकिएको थियो । गत वर्षभन्दा फरक तरिकाले परीक्षा सञ्चालन भएका कारण विगतमा जस्तै नतिजा सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा बोर्डमा विवाद छ । नतिजा प्रमाणित मात्रै गरेर विद्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने केही सदस्यहरुको तर्क छ ।
नतिजा सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बोर्डका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग बताए । बोर्डले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० लाई नतिजा प्रमाणिकरणको अन्तिम तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
नतिजा प्रकाशन गर्नुअघि बोर्डको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डका केही सदस्यले सोमबार नतिजा प्रकाशन नमुना (डेमो) को समेत अध्ययन गरिरहेका छन् । नतिजा प्रकाशनका लागि बाँकी रहेका काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले जानकारी दिए । ‘आज साँझ वा भोलि बिहानसम्म नतिजा आउने सम्भावना छ,’ उनले भने ।
यसवर्षको एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार परीक्षार्थी थिए । कोरोना भाइरसका कारण बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विद्यालयले लिएको अन्तिम परीक्षाको आधारमा विद्यार्थीको नतिजा बोर्डले प्रमाणित गर्दैछ । बोर्डले अनुमति दिए नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने कर्मचारी बताउँछन् ।
कोरोनाबाट थप ३ को मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या १०७ जना पुग्यो
पहिरोले घर पुरिँदा आमाछोराको मृत्यु
तस्करको समूह बाट १५ किलो सुन बरामद